Course Name: Professional Web Development Foundation
PRICE: 180000 MMK
Web Design +Web Development course နှစ်ခုပေါင်းထားတာကြောင့်ပိုမိုထိရောက်မယ် အချိန်ကုန် ငွေကုန်သက်သာမယ်၊တကယ်တတ်ဖို့လဲအာမခံတယ်အဲ့ တွက်ကြောင့်ခုဖွင့်မည့် အတန်းမှာ စာရင်းသွင်း
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းကျောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော web development
၊ကျောင်းသူများကို tulip နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော web development company မှာ on job training ဆင်းနိုင်ဖို့ကို အာမခံပါတယ် )
Professional Web Development Foundation Course
-လက်ရှိပြည်တွင်း၊ပြည်ပ IT company များအားလုံးနီးပါး web အခြေပြု နည်းပညာပေါ်မှာ
-သင်ရော IT company ကြီးတွေထဲ
ခြေစုံပစ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီး
-Website အားလုံးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ HTML,CSS,JS တို့ကိုတတ်မြောက်ပြီးပြီလား ?🤔
-Web အခြေပြု IT company တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ web အခြေပြု wordpress (CMS)
ဆိုတာကိုရော သင်သိပြီးပြီလား ?🤔
-Website တစ်ခုရဲ့ အသက်သွေးကြောနေရာက
နေ ပါဝင်နေတဲ့ PHP ဆိုတာကိုရော သင်လေ့လာ ပြီးပြီလား ?🤔
အကယ်၍ သင်မလေ့လာရသေးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Tulip Innovative Technology ရှိပါတယ်။🤗
ကျွန်တော်တို့ Training Center မှ မကြာမှီ
ဖွင့်လှစ်မည့် Professional Web Development Foundation Course တွင်
Website တစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ မဖြစ်မနေ ပါဝင်ရမည့် HTML ,CSS တို့မှစ၍သင်ကြားမည့် course တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။🤗
တတ်ရောက် သင်ကြားလိုပါက အခြေခံအနေ ဖြင့်
computer basic ရှိရန်သာလိုအပ်ပါသည်။🤗
Weekend day Class Section ( D ) (Sat & Sun) - တစ်ပတ် ၂ရက် ၃လ သင်တန်း၊ (1:00 PM to 4:00 PM) တစ်ရက် ၃နာရီ ဖြစ်ပြီး ၃လတက်ရောက်ရပါမည်။
(၁၆ ရက် ၊ ၆လ ၊ ၂၀၁၈)စမည်။
Week day Class Section ( A ) (Tue to Thu) - တစ်ပတ် ၃ရက် -၂လခွဲ သင်တန်း၊ (9:30 AM to 12:00 PM) တစ်ရက် ၂နာရီခွဲ ဖြစ်ပြီး ၂လတက်ရောက်ရပါမည်။ (၁၉ ရက် ၊ ၆လ ၊ ၂၀၁၈)စမည်။
"တစ်တန်းလျှင် ၁၀ဦးသာ လက်ခံသင်ကြားပေးမှာမို့
(16.6.2018) နေ့တွင်ဖွင့်မည့်အတန်းနှင့် (19.6.2018) နေ့တွင်ဖွင့်မည့် အတန်းကိုလူမပြည့်ခင် register အမြန်လုပ်ထားလိုက်တော့နော်"
1.HTML5 New tags
2.Three Layer of Web (overviews)
3.HTML Basic Tag
4.HTML New Tag
1.Basic Syntax Structure
7. Working With DOM
1.Basic Jquery method/Function
2.Understand the usage
4.What new in Jquery
1.Linking and Usage
2.Buildingaweb page with bootstrap
3.Further learn tenchnique
3.Global Method and Comparisons
4.Conditional Statement of PHP
1.Basic SQL Query Structure
2.Type of Database
3.CRUD 4.MYSQL Syntax
5.Mysql Query with PHP
6.Sql Security Basic
1.Basic Wordress Installation/Structure
2.Learning Wordpress Theme
3.Learning Wordpress Plugin
📚 Course ကိုသင်ကြားရာတွင် ပထမဦးဆုံး အနေနှင့် web development environment နှင့်ရင်းနှီးအောင် သင်ပြပေးသွားပါမည်။Website များသည် browser နှင့်ယှဉ်တွဲဖော်ပြရသည့် အတွက် စာသားနှင့်ပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာဖော်ပြရန်
• HTML (Hyper Text Markup Language) အားအခြေခံမှစ၍ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။😮
• ယခုလိုစာသားတွေဖော်ပြရုံသာမက website ၏
design နှင့်အသွင်အပြင်ကို တည်ဆောင်နိုင်ရန်
• CSS ကိုသင်ကြားပေးသွားပါမည်။😮
• CSS သဘောတရားကို နားလည်ပြီဆိုရင် CSS
• Bootstrap4 framework အသုံးပြုပုံကို ဆက်လက် သင်ကြားပေးသွားပါမည်။😮
• မိမိ website ၏ ပုံများ၊စာများ
မိမိ website ကိုအသုံးပြုမယ့် user ရဲ့
လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်း ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး
မိမိ website အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲမှု
ကျွန်တော်တို့ website မှာထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်
• Javacript အနေနဲ့ သင်ကြားရာတွင် အခြေခံဖြစ်တဲ့ DOM (Document Of Maniputation) ကို
• J Query framework
• ကျွန်တော်တို့ website ကို information ပြရုံသာမက application ဆန်ဆန် function
• PHP ကိုသင်ကြားပေးသွားပါမည်။🤓
• ဒါအပြင် ကျွန်တော်တို့ PHP နဲ့ project တွေလုပ်ဆောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသေးစားလေးတွေကိုလက်တွေ့သင်ကြား
• PHP နဲ့ function တွေရေးသွားပြီး website မှာ dynamic ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ Database နဲ့ချိတ်ဆက်ရန်
• Database ကိုသင်ကြားပေးပါမည်။😊
• Datebase SQL statement တွေနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ တသတ်မက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ information တွေကို အခြေအနေ တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီး အမြဲပြောင်းလဲနေအောင် database ထဲ အချက်လက်တွေထိန်းသိမ်းကာ PHP နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးအမြဲ ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးသွားပါမည်။😊
• ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြင်ပ project တွေလုပ်ဆောင်ရာမှာ အချိန်အကန့်သက် နဲ့ project ကိုပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အတွက် procedure အသင့်ရေးပြီးသား framework သဘောဖြစ်တဲ့ Wordpress CMS (Content Management System) ကို အသုံးပြုပြီး ပေါ့ပါးလှပတဲ့ website တစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို သင်ကြား
• အခြားသင်တန်းများနှင့်မတူ လက်တွေ့ project များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်တတ်သော error များကို ကိုယ်တိုင်ရှာပြီး၊ပြင်ဆင်နိုင်ဆောင် သင်ကြားပေးချင်း၊ online မှလိုအပ်သော source များ ရှာဖွေပုံကိုလဲ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ၀င်ရောက်သောအခါအဆင် ပြေချောမွေ့အောင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။🤗
• သင်ကြားရာတွင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော ဆရာများကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှ အတွေ့
အကြုံများကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တကယ်တတ်မြောက်စေရန် အာမခံဖြင့် သင်ကြားပေးမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ( မတတ်မချင်း အာမခံဖြင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် တကယ်ကြိုးစားချင်စိတ်လေးပဲယူလာရင်အဆင်ပြေပါတယ် 😊)
• နားမလည်သော စာများကိုလဲ အချိန်မရွေး
• သင်ကြားမည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် မေးမြန်းလိုပါက သင်တန်းကျောင်းသို့ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဆွေးနွေးမေးမြန်း၍သော်လည်းကောင်း တိုင်ပင် နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် (16.6.2018) နေ့တွင်ဖွင့်မည့်အတန်းနှင့် (19.6.2018)နေ့တွင်ဖွင့်မည့် အတန်းကိုလူမပြည့်ခင် register အမြန်လုပ်ထားလိုက်တော့နော်"
2.သင်တန်းသား(၃)ဦးအတူတကွလာရောက်အပ်နှံပါက တစ်ဦးလျှင် 5% Discount ပေးအပ်ပါမည်။
3.UCSY & IT major ကျောင်းသားများ (2)ဦးအတူတကွလာရောက်အပ်နှံပါက 5% Discount ပေးအပ်ပါမည်။
5.သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး အရည်ချင်းပြည့်မှီသော ကျောင်းသား/သူများကို သင်တန်းကျောင်း နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော web development company များတွင် On Job Training (OJT) စီစဉ်ပေးခြင်း။
★သင်တန်းကြေးမှာ (၁သိန်း ၈သောင်း )ဖြစ်ပါသည်။★
(weekend days)ကာလ အတွက် (၃လ) ဖြစ်ပါသည်။
(week days)ကာလ အတွက် (၂လ) ဖြစ်ပါသည်။
3.သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး အရည်ချင်းပြည့်မှီသော ကျောင်းသား/သူများကိုသာ သင်တန်းကျောင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော web development company များတွင် On Job Training (OJT) စီစဉ်ပေးပါမည်။
သင်တန်းသူသင်တန်းသားများဘာတွေ ဖြည့် စည်းပေးထားလဲ ?
သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ သင်ခန်းစာများ လေ့ လာနိုင်ရန် သင်တန်း အတွင် aircon,Internet Wi Fi, laptop များထားရှိပေးပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လာစုံစမ်းကြည့် ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
Tulip - Professional Web development Training Center - တိုက် ၅၈ ၊ 5လွှာ ၊ အခန်းနံပါတ် (5B) ၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်၊လှည်းတန်းနှင့်